Wasaaradda Ganacsiga oo Baareysa Tayada Badeecooyinka Soomaaliya Loo Soo Dhoofiyo | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Wasaaradda Ganacsiga oo Baareysa Tayada Badeecooyinka Soomaaliya Loo Soo Dhoofiyo
Wasaaradda Ganacsiga oo Baareysa Tayada Badeecooyinka Soomaaliya Loo Soo Dhoofiyo
Muqdisho (XT): Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa wada qorshayaal ay ku dardargelinayso sidii loo soo celin lahaa nidaamkii tayo dhawrka dalka oo meesha ka baxay kadib bubrurkii dalka ka dhacay 1991dii.
Wasiirka Wasaaraddaasi Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan ayaa dhawaan heshiis tayo dhawr ah la galay shirkad laga leeyahay dalka Turkiga oo la yiraahdo BGM waxaaa dhanka Turkiga heshiiskan u saxiixay Wasiirka Horumarinta dalkaasi Cevdet Yilmaz munaasabad ka dhacday magaalada Ankara.
Wargeyska Xaqiiqa Times oo xiriir la sameeyay Wasiirka Ganacsiga xilli uu ku sugnaa dalka Turkiga ayaa waxa uu u sheegay in si loo xaqiijiyo lixda tiir ee ay dawladdu higsanayso oo tiir kamid ah uu yahay in soo kabasho dhaqaale dalku sameeyo, Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha waxaa ka go’an in la ciribtiro keenista alaabaha iyo badeecooyinka tayadoodu liidato iyo in laga hortago badeecooyinka been abuurka ah ee dalkeenna loo soo dhoofiyo.
Wasiirka oo xog dheeraad ah siinaya Wargeyska ayaa sheegay in Wasaaradda Ganacsiga ay xaqiijineyso sidii loo qaadi lahaa dhawaan tallaabooyin lagu hubinaayo taya dhawrka si waafaqsan halbeegga caalamiga ah ee ISO 9001:2008.
Wasiirka Ganacsiga Soomaaliya iyo Wasiirka Horumarinta Turkiga oo heshiis tayo dhowr kala saxiinaya.
“Wasaaradda Ganacsiga & Warshadaha waxa ay la socod-siineysaa dadweynaha, ganacsatada iyo dadka daneeya hawlaheeda in Wasaaraddu ay bilaabeyso tallaabooyin sare loogu qaadayo taya-dhawrka waxyaabaha dalka loo soo dhoofiyo iyo in Wasaaradda ay dhaqan gelineyso xeerarka iyo hal beegyada taya-dhawrka ee u degsan dalkeenna.” Ayuu yiri Wasiirka oo farriin u diraya dadka ay hawshan sida gaarka ah u saameyn doonto.
Wargeyska Xaqiiqa oo u kuurgalay sida ganacsatadu u aragto hawshan ayay aad ugu kala duwanyihiin fikir ahaan. Qaar ayaa qaba in hawsha taya dhawrka ee haatan la bilaabayo ay tahay mid lagu degdegay maadaama ay jiraan waxyaabo muhiim ah oo ka horreeya. Kuwa kale ayaa qaba in loo hogaansamo arrintan maadaama tayo dhawrku uu aad muhiim ugu yahay mujtamaceenna oo wax walba dibadda ka keensada.
Dr. Maxamed Xasan waa khabiir dhanka tayo dhawrka ah. Waxa uu sheegay in shaqada koowaad ee wasaaradda laga rabo ay tahay sidii loo heli lahaa khubaro arrintan ku xeeldheer oo kala shaqeysa dhaqangelinta barnaamijkan. Waxa uu intaas ku daray in taya dhawrku keenayo in ay joogsadaan badeecadaha dhacsan iyo kuwa tayada liita laga ilaaliyo in ay soo galaan dalkeenna.
Wasiir C/raxmaan oo Milaano uga qeybgalaya bandhig ganacsi.
Khabiirka oo faahfaahinaya sida tayo dhawrka loo sameyn karo ayaa yiri “Si loo hubiyo tayada waxyaabaha la keenayo Soomaaliya waa in marka horeba ay jiraan shirkado caalami ah oo soo hubin kara in tayada alaabahaas ay u qalmaan in Soomaaliya loo soo dhoofiyo iyo in aan iska diidno. Kadib waxa ay shirkadaha taya dhawrka sameeya siinayaan shahaado ay ku caddeynayaan in badeecada Soomaaliya kusoo socoto ay tahay mid tayadeedu wanaagsantahay. Taasi waxa ay hawl-wadeennada Wasaaradda u fududeynaysaa taya dhawrka badeecooyinka yimaada. Sidoo kale bulshada waxa ay heleysaa daawo, raashin iyo alaabo aan halis ku ahayn deegaanka iyo fayo dhawrka”
Lama garan karo sida ganacsatada Soomaaliyeed oo maanta awood buuxda ku leh galgalka siyaasadeed ee dalka ay ku aqbali karaan arrintan balse Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha ayaa qabta in ay arrintan si degdeg ah uga hawl geli karaan maadaama ay heshiis la galeen shirkad caalami ah oo meel walba oo alaab laga soo rarayo ka sameyn karto tayo dhawr lagu kalsoonaan karo.
Wasiirka iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa sidoo kale safar ku tagay magaalada Milano ee dalka Talyaaniga si ay uga qeybgalaan bandhig carwo oo halkaasi ka dhacday ayna safarkaasi ku wehliyeen Gudoomiyaha Rugta Ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikariin Gabeyre, ku-xigeenkiisa Cabdirashiid Ceeynaanshe iyo xubno kale oo ka socday ganacstada Soomaaliyeed.
Previous articleSOHEDA oo Waxbarasho Bilaash Ah Siisa Ubadka Kasoo Jeeda Beelaha La Heyb Sooco
Next articleWaddada Loo Marayo Maamul Gobaleedka Mudug iyo Galguduud